Umagazini olandelayo ophrintiwe wephephabhuku i- "Potato System" ulungiselelwa ukukhishwa - i "Potato System" Magazine
I-XAG ikhombisa amandla we-drones emasimini amazambane
Isikhathi Sokufunda: 1 iminithi efundiwe
Ababhali abathandekayo, abakhangisi kanye nabafundi bohlobo oluprintiwe lwencwadi yethu!
Sidonsela ukunakekela kwakho eqinisweni lokuthi kuzophuma kukhishwe umagazini olandelayo ("Uhlelo Lwamazambane" 3). Usuku lokukhishwa okusha - Septhemba 10, 2020... Ngakho-ke, umnqamulajuqu wokwamukela izinto zokwenziwa odabeni nawo uhlehlisiwe: sizokwazi ukushicilela lezo zincwadi kuphela kanye namamojula wokukhangisa aya ehhovisi labahleli. kungakapheli umhlaka-24 Agasti 2020.
Ungase futhi uthande
Njengasikhathi sonke, silinde izinto zakho emakheli alandelayo:
Ukuxoxa amathuba okukhangisa lo magazini utholakala ngocingo:
+7 967 712 0202 Viktor Kovalev, Umqondisi Wentuthuko
+7 910 381 4776 Alla Shibalova, Umphathi Wemikhiqizo
Tags: umagazini "Potato System"inombolo entsha
Umhleli-omkhulu kumagazini wePotato System
Qaphela! "Hot" okunikezwayo!
Kunamakhasi amane kuphela amahhala asele olwazi lokukhangisa kumagazini wesine (wokugcina ngo-2021) wephephabhuku iPotato System. Siyamema...
Umagazini wesine wephephabhuku i- "Potato System" ulungiselelwa ukukhishwa
Ozakwethu abathandekayo nozakwethu! Ibhodi lokuhlela likamagazini i- "Potato System" lisebenza ngenkuthalo lilungiselela ukukhishwa komagazini olandelayo wokushicilelwa (No. 4, 2021) ....
Izizathu ezinhlanu zokufaka uhlelo lokusebenza lweselula lwe-Potato System magazine
Ufuna ukugcina unolwazi ngezindaba zakamuva zomkhakha, unentshisekelo ngombono wochwepheshe, izincomo zochwepheshe zibalulekile. Kuhlelo lokusebenza esilushicilelayo ...
Umagazini wesithathu wephephabhuku i- "Potato System" ulungiselelwa ukukhishwa
Ezinsukwini eziyishumi zokuqala zikaSepthemba, kuzoshicilelwa umagazini ekwindla kamagazini (Potato System No. 3, 2021). Izihloko ezisemqoka zomagazini omusha: Izindlela zokubona isivuno samazambane, ...
Izinkampani eziphezulu zezolimo ezingama-20 emhlabeni
Iqoqo lamazambane nokwakhiwa kwesitashi kuhlelwa ukuthi lenziwe eduzane naseNovosibirsk
"Agasti" 2020 No. 3 esihlokweni Bali Ukuphefumulelwa Abantu Азербайджан Isifunda sase-Astrakhan Isifunda saseBryansk Казахстан Inyunyana yamazambane I-Krasnoyarsk Territory UMnyango Wezolimo waseRussia Federation UMnyango Wezolimo waseRussia Federation Isifunda saseMoscow Isifunda saseNizhny Novgorod Isifunda saseNovosibirsk IRiphabhuliki yaseBelarus IRiphabhuliki yaseTatarstan IRiphabhulikhi yaseChuvashia Rosselkhoznadzor Rosselkhoztsentr I-Stavropol Territory Isifunda saseTula Uzbekistan Ukraine Ukukhishwa kwamazambane I-SouthAgro 2021 amazambane akhula umagazini "Potato System" Ukungenisa amazambane amazambane coronavirus ukunisela ukucubungula amazambane ukulungiselela isizini ukutshala amazambane Umkhiqizo wama-fries waseFrance ama-chips ukukhiqiza amazambane okuqala amazambane embewu isiteshi sethelegramu samagazini i- "Potato System" ukuvuna amazambane ukugcinwa kwamazambane amanani amazambane